Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Guatemala Breaking News » Nanjary mora kokoa ny fizahan-tany ho any Guatemala sy Cancun
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Guatemala Breaking News • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Guatemala dia nipoitra ho toy ny foibe any Amerika Afovoany, mamorona fifandraisana amin'i Mexico sy ny sisa. Ny tanàna fialantsasatra meksikana Cancun dia mora azo izao avy any Guatemala, Honduras sy ny sisa, manokatra fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany eo amin'ny firenena roa tonta.
Izany dia noho ny TAG Airlines, mpitatitra any Goatemalà tranainy.
TAG Airlines dia hanomboka hiasa any Mexico manomboka ny volana aogositra, miaraka amin'ny sidina izay hifandray amin'ireo tanànan'i Guatemala sy Tapachula, manomboka ny 13 Aogositra, ary Guatemala sy Cancun, ny 19 aogositra.
Ny mpandeha dia hanana ny safidin'ny sidina mivantana mampihena ny ora sy ny vidiny, ny làlana vaovao dia hahazo tombony ho an'ny mpizahatany sy ny bus izay mandeha amin'ny toerana roa.
Goatemalà tahaka ny Fanahin'ny tany ary amin'ny maha-fon'ny tontolon'ny Maya azy, dia manolotra fahasamihafana maro samihafa manintona voajanahary, arkeolojia ary gastronomia, ankoatry ny hafa.
Cancun dia nipoitra ho toerana fizahan-tany mane any Mexico tsy ho an'ny Amerikanina ihany fa ho an'ireo mpitsidika manerana an'i Amerika Afovoany sy atsimo, ary koa any Eropa.
Ny mampifandray an'i Cancun amin'i Tapachula dia fanatsarana lehibe hampifandraisana an'i Guatemala sy ny sisa amin'ny tamba-jotra TAG any Amerika Afovoany amin'ity tanàna fialantsasatra Meksikana ity.
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) dia kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsy miankina sy foibe misy ny foibeny ao amin'ny Zone 13 ao amin'ny tanànan'i Guatemala, ary manana ny foibeny lehibe ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena La Aurora. Niorina tamin'ny 1969 tao Guatemala City
Manomboka amin'ny 13 Aogositra, ny làlana vaovao Guatemala-Tapachula-Guatemala dia hanatrika ny lalam-pirenena manaraka miaraka amin'ny hatetika dimy isan-kerinandro:
Flight lalan-danitra Frequency fandaharam-potoana
220 Guatemala-Tapachula Alatsinainy-zoma 10: 30-12: 15 ora
221 Tapachula-Gatemala Alatsinainy-zoma 14: 00-13: 45 ora
Mandritra izany fotoana izany, manomboka amin'ny 19 Aogositra, ny Route Guatemala-Cancun-Guatemala vaovao dia hanatanteraka ity zotra manaraka ity miaraka amin'ny hatetika efatra isan-kerinandro:
200 Guatemala-Cancún Talata, alakamisy, sabotsy ary alahady 10: 00-13: 10 ora
201 Cancún-Gatemala Talata, alakamisy, sabotsy ary alahady 14: 10-15: 20 ora
Julio Gamero, tale jeneralin'ny TAG Airlines, dia nilaza fa "ny faritra atsimo atsimo atsinanan'i Mexico dia manan-danja sy manintona tokoa ho an'ireo mpandeha amin'ny fialan-tsasatra sy orinasa, noho ny hatsaran-tarehy voajanahary, ny harena ara-kolontsaina ary ny fifandraisan'ny faritra amin'ny fitomboana ara-toekarena."
“Tena reharehantsika ny manomboka miasa any Mexico. Ny mpifaninana ara-toekarena iray manan-danja dia tsy isalasalana fa ny Mayan Train, izay ho lasa vato fehizoro amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimo atsimo atsinanana, amin'ny alàlan'ny famoronana asa, ny famatsiam-bola ary ny fampiroboroboana ny fizahantany, "hoy ihany izy.
Gamero dia nisaotra ny manampahefana meksikana ao Quintana Roo sy Chiapas noho ny fahatokisan'izy ireo, ary koa ny Minisiteran'ny Fizahan-tany Federaly, ireo mpiara-miasa aminy, ary ny Ivontoerana Fizahan-tany Guatemala, izay ahafahana manao fanamafisana ny fifandraisana amin'ny rivotra eo amin'ny firenena roa tonta.
TAG Airlines dia orinasa 100 isan-jato Guatemala izay nandritra ny 50 taona dia nitana fikirizana tamin'ny fifandraisan'ny rivotra sy ny fampandrosoana. Miasa sidina 27 isan'andro any Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, ary any Mexico izy izao, miaraka amina fiaramanidina maherin'ny 20.
Ho fanampin'izany, ny TAG Airlines dia manana fanekena mafy amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpandeha aminy, koa amin'ny sidina rehetra dia mampihatra fepetra momba ny fahadiovana sy fidiovana izy io.